PressReader - Ilanga: 2018-11-29 - BAKHULISA UMABONAKUDE "ESANDLENI"
BAKHULISA UMABONAKUDE "ESANDLENI"
Ilanga - 2018-11-29 - Ezikamabonakude - LUCKY CAIN
UKUMBA eqolo kwe- data kuthikameza ukuthuthukisa indlela abantu ababuka ngayo izinhlelo zikamabonakude. Lokhu kuvezwe nguMnu Niclas Ekdahl oyi-Chief Executive Officer ye-Connected Video kwaMultichoice Group. UMnu Ekdahl nguyena obhekelela ukuthuthukisa uhlelo lokuba abantu bakwazi ukubukela izinhlelo ze-Dstv komakhalekhukhwini babo besimanje.
Uthi nakuba abantu sebeqalile ukuzibukela izinhlelo komakhalekhukhiwini babo kodwa kusenzima kwabanye njengoba zisebenzisa i- data okuyinto okukhalwa ngayo kakhulu eNingizimu Afrika ukuthi ibiza ngokweqile. Uthi kwamanye amazwe abantu abaningi kabalindi ukuba baze bafike emakhaya ukuze bakwazi ukubuka izinhlelo abazithandayo kumabonakude. Uthi iShowmax ne-DStv Now yakhelwe ukuba abantu bakwazi ukubuka izinhlelo zikamabonakude komakhalekhukhwini babo.
“Nakuba sithanda ukuba lokhu kwande kodwa siyazi kuzobanzima ngenxa yentengo ye- data kuleli,” esho ngesikhathi abakwaMultichoice begabisa ngezinhlelo zabo zangonyaka ozayo. UMnu Ekdhal uqhube wathi babalelwa ku-500 000 abantu bakuleli asebeqalile ukusebenzisa lolu hlelo lokubukwa kwezinhlelo zikamabonakude komakhalekhukhwini.
Uthi nakuba kuyisifiso sabo ukuba sande isibalo kodwa kabafuni ukuba abantu bayekele ukubuka omabonakude babo emakhaya njengoba besahamba phambili ngokubukelwa emhlabeni. Ukwanda kobuchwepheshe emhlabeni kwenza izinto zehluke kakhulu njengoba abantu sebezitika ngokuzikhethela ukuthi bafunani ngasiphi isikhathi.